भूकम्प पीडितलाई नयाँ ट्याक्सी नम्वर, क-कसलाई पर्‍यो ? (नामावलीसहित) | Capital Khabar ::
गृह Breaking News भूकम्प पीडितलाई नयाँ ट्याक्सी नम्वर, क-कसलाई पर्‍यो ? (नामावलीसहित)
भूकम्प पीडितलाई नयाँ ट्याक्सी नम्वर, क-कसलाई पर्‍यो ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं । सरकारले भूकम्प प्रभावित परिवारलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने गरी ट्याक्सी नम्बर बुधबारदेखि वितरण गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले बुधबार ललितपुरको च्यासलस्थित फुटबल मैदानमा गोलाप्रथाद्धारा भूकम्प प्रभावितका परिवारलाई ट्याक्सी नम्बर वितरण कार्यको सुरुवात गरिएको हो ।
पहिलो दिन काभ्रे, नुवाकोट र रामेछापका भूकम्प प्रभावितलाई ट्याक्सी नम्बर वितरण गरिएको हो । विभागका अनुसार काभ्रेमा २०१, रामेछापमा १६५ र नुवाकोटमा १२५ भूकम्पपीडितले ट्याक्सी नम्बर पाएका छन् ।
त्यसैगरी विहिबार आज अर्थात दोस्रो दिन दोलखा, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भूकम्पपीिडितलाई ट्याक्सी नम्बर वितरण गरिनेछ । दोलखाका २ सय १४, सिन्धुलीका ४६, सिन्धुपाल्चोकका २ सय ५३ भूकम्पपीडितले ट्याक्सी नम्बर पाउनेछन् ।
शुक्रबार अर्थात तेस्रो दिन काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, गोरखा, रसुवा, मकवानपुर र ओलढुङ्गा जिल्लामा वितरण गरिनेछ । काठमाडौंका ९५, ललितपुरका ७२, भक्तपुरका ४३, मकवानपुरका ३१, धादिङका १ सय १७, ओखलढुगाका ३०, गोरखाका ७८ र रसुवाका ३० भुकम्प प्रभावित परिवारले ट्याक्सी नम्बर पाउने छन् ।
अघिल्लो लेखमानेपाली विद्यार्थीले बनाए अन्तरिक्षा यात्री बस्ने ‘फोबोस
अर्को लेखमारोनाल्डोको निर्णायक गोलपछि पोर्चुगल विजयी